Weerar xoogan oo ka dhacay degmada Janaale – Puntlandtimes
Weerar xoogan oo ka dhacay degmada Janaale
Wararka ka imaanaya degmada Janaale ayaa waxa ay kusoo waramayaan in degmadaasi uu xalay dagaal culus ku dhax maray xoogaag ka tirsan alshabab iyo ciidanka dowlada Somalia oo garabka ka helaya kuwa Maraykan ah.
Ciidamada Maraykanka oo ka dagay diyaarado dagaal ayaa duleedka degmada Janaale waxa ay isaga hor yimaadeen dagaalyahano ka tirsan Shabaab, waxaana halkaasi ku dhexmaray dagaal culus.
Wallow aan si dhab ah loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi ciidamada huwanta ku dhexmaray degmada Janaale ee gobolka Shabellaha hoose ayaa hadana saraakiil ka tirsan dowladda waxa ay sheegeen Shabaab in khasaare lagu gaarsiiyay weerarka.
Intii dagaalka uu socday ayaa waxaa bar bar socday duqeyn diyaarado ay ka fuliyeen gudaha degmada Janaale, duqeyntaasi oo meelo kala duwan oo magaalada kamid ah ku dhacday.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in duqeynta diyaaradaha ay fuliyeen in ay ku dhacday guryo qaar oo dad shacab ah ay dagan yihiin, halka ay jiraan goobo Shabaab ay ku sugnaayeen duqeynta qaar inay ku dhacday sida saraakiil ay xaqiijiyeen.
Marka laga soo tago sheegashada saraakiisha dowlada Somalia ee ku aadan weerarkaasi Al-Shabaab weli kama aysan hadlin dagaalka kadhacay Degmada Janaale